Hel diyaar u ah inay leeyihiin qaar ka mid xiiso leh shaqo la yaab leh ka IWG, Fast Buck Lucky. Sida magacaba ka muuqata, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku guuleysato qaar ka mid ah, anagana weyn soomi. Ma jiraan hal ama laba laakiin sagaal siyaabo in aan halkaan ku guuleysto. IWG waa kuwa caan ku tahay soo koraya qaar ka mid ah kulan ee ugu fiican in industry ee ka abuuray this mid ka mid ah iyo sidaan u sameeyey shaqo weyn ee. Tani waxaa laga heli karaa ku dhawaad ​​oo dhan naadi Ghanna site internet-ka. Si aad u heli, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa diiwaan on kuwaas naadi Ghanna site iyo bilaabaan ciyaaro. Waxa kale oo ay leedahay saddex kulan mini in aad siin jid kale inuu ku guuleysto waxa at. Lahaanshaha iman kara guusha weyn iyo RTP ah 10.09% ka dhigan tahay in aad kasta sharad £ 100, waxaad ka heli doontaa dib £ 90,90, oo waa weyn.
Play Fast Buck Lucky at naadi Ghanna site
Waxay leedahay jeeda madow iyo muuqaallo kale oo dhan waa in isku darka ee jaalaha ah iyo cagaar ah. At sare ee, waxaa qoran ay magaca iyo hoos ku qoran in saddex loox kala duwan waxaa la siiyaa. Saddexdan columns jira saddex mini-kulan oo kala duwan. Weelasha oo dahab ah, Lucky kabo faras iyo afar dhir caleen. Waxaad diyaarsan kartaa size bet adigoo gujinaya ah + iyo – fursadaha siiyey shaashadda. Waxaa jira button play ah la siiyo si ay u bilaabaan u ciyaaro Waxaad ka heli kartaa wax kasta oo naadi Ghanna site iyo abaalmarinayn dalabyo kala duwan in ay bixiyaan. Ku dhawaad ​​oo dhan naadi Ghanna site taageera kulan IWG awoodaan si ay kuu siiyaan ciyaarta Afyare noqon doonaa.
Gameplay An Interesting
gameplay waa mid aad u fudud oo weli xiiso leh. Ka hor inta aadan bilaabin off, waxaa la siin doonaa doorasho si ay u dejiyaan bet aad ka dibna aad riixi kartaa bilowga. Sida aad riix ikhtiyaarka PLAY aad arki doonaa seddex kulan mini. Waxaad ka heli doorasho kala duwan oo guusha on dhan seddex ka mid ah kuwan. In ciyaarta 1, qaansoroobaad is muujin doonaa oo idin siiyo abaalmarinta saf u dhigma. In ciyaarta 2, aad leedahay si aad u dhigma saddex xaddi si ay u hesho in ay lacagta ku guuleystay iyo in ciyaarta 3 aad leedahay si aad u dhigma 2 calaamadaha ka mid ah oo isku xigta hal inuu ku guuleysto abaalmarinta bandhigay Safka. Waxaa jira in total 9 fursado ay ciyaarta ku badin this. Sidaas gal ah naadi Ghanna site iyo bilaabaan ciyaaro.
Waa mid ka mid ah ugu il-farxiya iyo mashquuliya id ah dadka kale ee noocan oo kale ah ku sifayn kulan. Waxaad si fudud ku guuleysan karo lacag aad u badan oo ay leeyihiin xiiso leh iyadoo ciyaaro. Qaybta ugu wanaagsan waa in ay tahay si fudud u heli karaa wax kasta oo naadi Ghanna site ciyaartoyda.